Renewable Business Process Outsourcing - Kimroy Bailey Group
Ny fizotran'asa fihavaozana azo havaozina
Ny fizotran'asa fihavaozana azo havaozinaKimroy Bailey2020-04-05T06:29:06-05:00
LALAO mendrika Hanafaingotra ny varotrao MIARAKA AMINAY ankehitriny Jereo ny raharaha> SORATY MANDROSO TOVANA NY TOKONY HO ANY SNAP CHAT Ny fananana PRODUCTIVE dia tsy voatery ho BORING mizotra amin'ny TENA TOKONY NY FIVAVAHANA! Ny tena mandroso indrindra Kitapom-panofanana AMBONY CASE>
Kimroy Bailey Group Corporate fanavaozana Services
Kimroy Bailey Group fanavaozana ho an'ny raharaham-barotra fanavaozana ny famokarana vahaolana dia manaisotra ny aretin'andoha handrafetana ny turbine rivotra mega na tetikasa fametrahana solar. Amin'ny maha mpitarika anay eo amin'ny sehatry ny angovo azo havaozina sy ny Robotics, mirehareha izahay fa hanome vahaolana amin'ny fanavaozana ny fizotran'ny toekarena vaovao hanavaozana ny fiainam-pifandraisan'ny mpanjifantsika sy ny mpiasany ary hahafaly kokoa ny asany.
Ny tanjonay dia ny famelomana ireo miliara an'arivony tapitrisa amin'ny orinasa angovo azo havaozina. Mijanona eo alohan'ny teknolojia farany momba ny indostria izahay ary manome fiofanana amin'ny kilasy eran-tany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Oniversite Trott Bailey, Fitaovana rindrambaiko sy BPO mba tsy ho voarebirebin'ny mpanjifanay amin'ny fanajana ny fironana. Fa afaka mifantoka amin'ny fampandehanana asa isan'andro izy ireo ary mahatoky antsika amin'ny farany farany mba hitazomana ny mpiasa ao aminy, afa-po ny mpanjifany ary mitombo ny varotra mahazo tombony.
Karazan'orinasa orinasa mamatsy fiofanana ho anay
Tsindrio raha hizaha ny Slideshow amin'ny fizotran'ny raharaham-barotra
Ianao dia mila ny vahaolana famaritana ny fihavaozana momba ny raharaham-barotra raha toa ka
Real Estate developer na orinasa orinasa
Orinasa fametrahana ny masoandro
Oniversite / Sekoly
Na iza na iza, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao miasa amin'ny tetik'asa angovo kely na lehibe na fanavaozana ho an'ny: solar, rivotra, hydro na Geothermal
Inona no atao hoe consultation Business Proses Outsourcing consultation?
Niresaka vetivety izahay mba hahitana hoe inona ny haavon'ny fanohanana ilainao. Azontsika atao ny mitazona ny tetikasa manontolo na singa tokana manokana raha toa ianao ka manana ekipa mahay miatrika ireo antsipiriany hafa.
Famaranana tanana ary famaranana ny tetikasa dia hifarana
Serivisy fanofanana sy fitaovana - Manomeza ekipanao ny ekipanao hikarakara ny fikarakarana ny tetikasa aorian'ny fametrahana sy ny vaomiera amin'ny serivisy fanofanana sy ny fitaovana
Tonga lafatra ho an'ireo orinasa te-hahazo fanavaozana ny fanamarinana mpiasa. Lehibe famelombelona sy teknolojia trending ary drafitra fandidiana
Fitaovana eo amin'ny sehatry ny raharaham-barotra azo havaozina ilaina amin'ny serivisy sy fitaovana ampiasaina: Manome ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny asanao izahay. Avy any Cranes mankany kamiao hydraulic, fitaovam-piarovana ho an'ny singa sy ny singa rehetra. Isika ihany koa dia mihazona ny fanomanana ny tany, ny fanadiovana, ny fipetrahana, ny fanaraha-maso, mba hahazoana antoka fa misafidy ny toerana mety indrindra ho an'ny tetik'asa angovo azo havaozina ianao hanafaingana ny fandaharam-bola sy ny tombom-barotra.